Andrianantenaina Amédé : Fiainan’izy mianakavy ny karaté
dimanche, 08 janvier 2017 16:32
Sary nomena Sobika
Toy ny rà mikoriana ao anatin’i Andrianantenaina Amédé ny karaté. Efa io no fiainany, na polisy aza no anton-draharahany.
Teo amin’ny faha-17 taona i Amédé no nanomboka nanao karaté tao amin’ny Club Vika (Vital Karaté Do) tao Besorohitra Fianarantsoa.
Mpiara-mikatroka taminy tao amin’io klioba io ny vady andefomandriny.
I Amédé no lasa lavitra sy tena nandalina kokoa ary efa nivoaka tany ivelany matetika tamin’io taranja karaté io fa ny vadiny kosa noho ny fiovaovan'ny fiainana dia manapatapaka fanazarantena. Iray ny zanak’izy ireo dia i Amed Dylan.
Vao roa taona monja i Dylan dia efa nentin’i Amédé manaraka azy any ampanaovana fanazarantena ary nony feno telo taona sy tapany dia nampianariny ny fototra karaté toy ny ankizy rehetra.
Valo taona i Dylan ankehitriny. Efa tompondaka tamin’ny « Chalenge » tany Fianarantsoa izy ny taona 2015 teo amin’ny sokajy « Poussin ». Tompondakan'ny « Coupe de nouvel An » FIHEZAMA 2016 natao teto Antananarivo ihany koa i Dylan teo amin’ny sokajy « Poussin » latsaky ny 25 kg.
Tompondaka lefitra ihany koa i Dylan tamin’ny Festival Jerijery izay natao tany Vavatenina ny taona 2015.
38 taona i Andrianantenaina Amédé amin’izao. Tempana mainty « 3ème dan » izy. Polisy eny amin’ny FIP Antanimora izy ary izy ihany koa no anisany nitsirian'ny hevitra hanangana ny Cospn karaté, raha mpiandry tsatokazon’ny Cospn Foot izy teo aloha.
Maro ny anaram-boninahitra eo ampelan-tanany. Tompondakan’i Madagasikara 2015, tamin’ny fifaninanam-pirenena natao tany Vavatenina.
Nandray anjara tamin’ny fiadiana ny tompondakan’ny Ranomasina indianina natao tatsy amin’ny nosy La Réunion tamin’ny 2015 sy tatsy Maurice tamin’ny septambra 2016.
Antenaina fa tsy hijanona hatreo ny fiakaran'ity tanora ity fa ho reharehan'ny Firenena Malagasy hatrany ivelany mihitsy raha misy ny fanohanana azy amin'izany.
jeudi, 23 novembre 2017 13:43
Cialis Non Generico Proper Amoxicillin Dosage Cialis Prix Pharmacie Lyon [url=http://sildenafdosage.com]viagra[/url] Viagra Generic Kaufen In Holland What Is Cephalexin Caps Fluoxitine Without A Prescription
jeudi, 16 novembre 2017 20:14
jeudi, 16 novembre 2017 17:20
Levitra Acquistare Viamedic Scam [url=http://ciali40mg.com]buy cialis[/url] Cheap Cialis Generic
dimanche, 12 novembre 2017 18:15
mercredi, 08 novembre 2017 13:47
lundi, 06 novembre 2017 19:32
Zithromax And Drinking Alcohol Cheap Doxycycline 180 100 Mg Without Rx [url=http://costofcial.com]cialis online[/url] Levitra Rendeles Propecia Nizoral Pattern Baldness Perlutex
samedi, 04 novembre 2017 23:28
Lioresal Generique En Canada Meds From India Cialis 2013 [url=http://cheapcheapvia.com]viagra[/url] Cheap Effective Propecia Zithromax Child Dose
mardi, 31 octobre 2017 13:52
Cialis Ricetta Online Achete Du Cialis En France Livraisons Rapide Acheter Kamagra Fr [url=http://buyvarden.com]orderviagra levitra[/url] Diamox Doxycycline Secure Ordering Overseas
mardi, 31 octobre 2017 11:34
What Does Amoxil Treat Cialis Viagra Controindicazioni Propecia Depression Additionally [url=http://cialgeneri.com]generic cialis[/url] Azitromicin Order Craigslist Generic Tadalis Sx Soft Omnigen
vendredi, 27 octobre 2017 17:41